Iyo Yakanyanya Kunze Kwekunze Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Iyo Yakanakisa Kunze Kwewiricheya
Karman anga aine vaviri vavo mawiricheya akasarudzwa sezvo maviri epamusoro mashanu akanakisa ekunze mavhiripu. Izvi zvinoratidza izvozvo Karman Healthcare yakazvipira kupa kumusoro kweiyo mutsara midziyo kubvumira avo vasina iyo simba kutenderera vane zvakanyanya kufamba zvinogoneka. Ivo vanoita mune zvese mhando yemidziyo senge hwiricheya, Magetsi Mawiricheya, Scooter, uye anobatsira ekufamba seanogudubudza uye vanofamba. Karman Utano hwehutano hwakagadzira akawanda magadzirirwo anoenderera mberi kuvandudza wiricheya masimba, kuwanikwa, uye nyaradzo.
Karman's S-305 Ergonomic Ultra Lightweight wiricheya.
Yekutanga uye nhamba imwe yeashanu epamusoro mawiricheya ekunze ndiyo Karman's S-305 Ergonomic Ultra Lightweight wiricheya. Iyo ine yepamusoro mutengi chiyero chekunyaradza uye durability ichiita imwe yeakanakisa uye epamusoro anotengeswa mumusika.
Zviri lightweight zvakadaro inoramba yakasimba, kusiyana nevakawanda mavhiripu kuti uwane kugadzikana munhu anofanira kuzvipira pane uremu hunhu hunobatsira vazhinji. Ichi chimiro yakakosha kune vazhinji nekuti zvinovatendera kushandisa simba shoma kuti vazvisimudzire kana kufamba famba zviri nyore. Inosanganisira pamusoro pembiru padding ine anti-bhakitiriya chigaro. Iyo padding inobatsira ku kuvandudza kunyaradzwa kwe wiricheya ruzivo izvo zvinogona batsira kuvandudza kumira uye kudzikisira kukuvara kwemuviri kuchimiro chemuzongoza. Chigaro che anti-bhakitiriya chinobatsira kudzikisa mikana yekuwana hutachiona nekubvumira kupisa kwemuviri kutiza muviri kuti upfuure nechigaro. Izvi zvinodzivirira unyoro kubva pakuvaka. Ichi ndicho chinhu chakakosha kune avo vakashandisa wiricheya kwenguva refu yenguva.
Wiricheya iyi inouyawo nekukurumidza kusunungura mavhiri asi inogona kuve inonetsa kushanda asi inogona kuve yakakosha ficha yakawanda zvinobatsira kubva kunodzidziswa.
Karman Healthcare's wechipiri wiricheya iyo yakaiswa mukati mevashanu vepamusoro yaive iyo LT-980 Ultra-Lightweight wiricheya icho chakaisa chechishanu. Wiricheya iyi zvisinei nekutengesa kure zvinhu yakakwanisa kuisa pakati pevashanu vepamusoro nekuda kweiyo yakanyanyisa dhizaini rekuyera.
The tradeoff zvinhu inosanganisira kugadziriswa kwetsoka uye kugadzirisa armrest kunogona kuve zvakakosha asi akaendeswa ku ipa yakasimba zvakadaro isina kurema wheelchair zvimwe zvinoda. Iyo wiricheya chete inorema mapaundi makumi maviri nemana izvo zvinogona kuve nyore senga inowedzera mukana wekuti vazhinji vaisimudze mumotokari. Kutenda kune chimiro chekutsika pamavhiri chinopa kufamba kwakatsetseka mumba uye nekunze senge nzira dzemumigwagwa.
izvi mawiricheya chete havana kugona kushandiswa nyore nyore pahuswa sezvavari. Zviri zvinogoneka nekushandiswa kweiyo vakasununguka iyo yakasungirirwa kumberi kwechimiro cheiyo wiricheya uye izvo zvinowedzera kushandiswa kweiyo wiricheya pane mamwe akawanda nzvimbo.